Madaxtooyada oo caddaysay waqtiga uu MW Farmaajo u duulayo dhanka Dhuusamareeb | Hadalsame Media
Home Wararka Madaxtooyada oo caddaysay waqtiga uu MW Farmaajo u duulayo dhanka Dhuusamareeb
Madaxtooyada oo caddaysay waqtiga uu MW Farmaajo u duulayo dhanka Dhuusamareeb
(Muqdisho) 18 Luulyo 2020 – MW Somalia, Md Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa lagu wadaa inuu u ambaboxo magaalada Dhuusamareeb oo ay ku sugan yihiin madaxda maamullada.
War kooban oo kasoo baxay Madaxtooyada Villa Somalia ayaa lagu caddeeyey inuu maanta gelinka dambe ka duulayo magaalada Muqdisho, isaga oo kusii jeeda dhanka Galmudug.
”Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galabta gaaraya Dhuusamareeb si uu halkaasi uga qeybgalo shir ay yeelanayaan Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladaha Xubnaha ka ah oo lagu gorfeynayo wada shaqeynta labada heer ee Dowladda iyo doorashooyinka qaran ee nagu soo fool leh.” ayaa uu u dhignaa war kasoo baxay Madaxtooyada.
Madaxweyne Farmaajo ayaa hoggaaminaya wefdi ay ka mid yihiin madax kale, waxaana socdaalkiisa ku wehlinaya Ra’iisul Wasaare Xigeenka, Mahdi Guuleed.
Previous articleDHEGEYSO: ”Marka aan hindhiso waa inaan dadka u sharraxaa” – Sida uu karoonuhu u saameeyey nolosha Soomaalida
Next articleAxmed Madoobe oo maanta booqanaya Cadaado (Xiriir hore oo kala dhexeeya & xeelad ku jirta booqashadan)